Warar - Qiimaha Alaabta ceyriinka ah ayaa sii kordheysa
Tan iyo bilowgii sanadkan, alaabta ceyriinka ah sida alwaax, isbuunyo, walxaha kiimikada lagu dahaadho, biraha aan birta ahayn, iyo xitaa kartoonada ayaa kor u kacayay, qiimaha qeybaha qaarna xitaa wuu laba jibaarmay. Tusaale ahaan, biraha aan birta ahayn waxay kor u kaceen qiyaastii 50%, iyo poly-ether xumbo jilicsan, oo ah walxo cayriin oo muhiim u ah xumbo isbuunyo ah, ayaa sare u kacay 126.74% afartii bilood ee la soo dhaafay.
On Focus, qiimaha alaabta ceeriin ee birta ah ayaa soo socota tan iyo Jan, 2021. Maalmahan, dabayaaqadii Gu'ga kadib, wali waxay ku jirtaa isbeddel koritaan.
Waxyaabaha ugu muhiimsan waa sida hoos loo dhigto:
● Soo saarida birta sanadka 2020 way ka yartahay wax soo saarkeeda sanadka 2019
Of Wasaaradda Ecology iyo Deegaanka: Si firfircoon kor loogu qaado birta iyo birta, dhuxusha iyo warshadaha kale si loo xalliyo awoodda xad-dhaafka ah
Demand Suuqa dalabka warshadaha makiinadaha ayaa sii wadi doona soo kabashadiisa, jawiga qalliinka ayaa la filayaa inuu sii wado inuu sii fiicnaado.
Falanqeyntu waxay aaminsan tahay in kororka qiimaha alaabta ceyriinka ay tahay hal dhinac oo ay saameyn ku yeelatay faafitaanka cusub ee caabuqa oof-wareenka adduunka, dhinaca kalena waa ka-faa'iideysiga la filayo ee soo-kabashada dhaqaalaha adduunka ka dib markii tallaalka cusub ee taajka la bilaabay mustaqbalka. Iyada oo laga jawaabayo kor u kaca qiimaha alaabta ceyriinka, qalabka guryaha iyo shirkadaha kale ayaa ku dhawaaqay kororka qiimaha.
Suuqa birta ayaa galay waji jaan go'an. Waxaan saadaalineynaa in aragtida suuqa ay wali yeelan doonto xawaare kor u kaca isla markaana waxyar laga hagaajin doono mustaqbalka dhow, iyadoo la sugayo baahida dhabta ah ee bilaabeysa.
Hantida maaliyadeed waxay haysaa alaabta ceyriinka ah iyo qiyaasaha ku saabsan badeecooyinka suuqa mustaqbalka waa sababaha sare u kaca qiimaha badeecada ee dhowaan. Isbedelkani wuxuu socon doonaa ugu yaraan laba sano, cadaadiska qiime dhaca RMB wuu sii kordhi doonaa. Dhaqaalaha adduunka kuma uusan soo kabsan jawi baahi dabacsan oo ku saabsan dhaqaalaha dhabta ah.